विकास Archives ~ Banking Khabar
बैंकिङ खबर । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा व्यापार घाटा घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको असोज मसान्तसम्मको रिपोर्ट अनुसार व्यापार घाटा १२ प्रतिशतले घटेको छ । असोज मसान्तमा नेपालको व्यापार घाटा तीन खर्ब सात अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । निर्याततर्फको वृद्धि र आयाततर्फको गिरावटका कारण व्यापार घाटामा संकुचन आएको
बैंकिङ खबर । चालू आर्थिक वर्षमा महँगी अत्याधिक बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितीको समीक्षा गर्दै यस्तो बताएको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको रिपोर्टमा असोज मसान्तसम्मको औसत मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धिदर) ६.२१ प्रतिशत रहेका उल्लेख छ, जबकी गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मुद्रास्फीति ४.६८ प्रतिशत मात्रै थियो
करसम्बन्धी ११ काम मोबाइल एपबाटै, केके गर्न सकिन्छ ?
बैंकिङ खबर । आन्तरिक राजस्व विभागले आफ्नो मोबाइल एपमा विभिन्न फिचर थप गरेको छ । कर दिवसको अवसरमा २०७६ मंसिर १ गतेदेखि लागु हुने गरी एपलाई अपग्रेड गरिएको हो । पछिल्लोपटक अपग्रेड गरिएको आईआरडी एपको सहायताले अब प्यान डिटेल सर्च गर्न, सूचना, प्रकाशन, सम्पर्क नम्बर र करसम्बन्धी विविध जानकारी लिन, ईपेमेन्ट गेटवे प्रयोग गरी कर
विदेशबाट ल्याउने सामानको कर बढ्यो, केकेमा दिइयो छुट ?
बैंकिङ खबर । अर्थमन्त्रालयले विदेशबाट आउने सामानको भन्सार शुल्क बढाएको छ । सरकारले विदेशबाट फर्कदा नेपाली कामदारले ल्याउने सुनको मूल्यको भन्सार दरका साथै कस्मेटिक मालवस्तु, सरसफाइको सामान, कफि लगायतको अन्तःशूल्क बढाएको हो । अब विदेशबाट फर्कदा ल्याउने काचो सुनको ५० ग्रामसम्म प्रति १० ग्रामको हिसाबले ७५०० रुपैयाँ र १०० ग्राम ल्याउदा बाँकी ५० ग्राममा १०
डुइङ बिजनेश रिपोर्टमा नेपालमा नेपालको छलाङ, १६ स्थान उक्लियो
बैंकिङ खबर । विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको डुइङ बिजनेश रिपोर्टमा नेपालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य सुधार गरेको छ । गत वर्ष ११० स्थानमा रहेकोको नेपाल यो वर्ष ९४ स्थानमा उक्लेको छ । नेपाल १० सुचाकंमा ५ वटामा सुधार गरेको छ भने ३ वटामा स्थान तल झरेको छ र २ वटा सूचकमा स्थिर रहेको छ ।
पोसकान्त पोखरेल । तिलोत्तमा नगरपालिका–१४ बनकट्टी रुपन्देहीमा चार करोड रुपैयाँको लगानीमा वातावरण मैत्री उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । आईतबार तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगरप्रमुख बासुदेव घिमिरेले औपचारिक रुपमा एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरेसँगै नन् ओभन ब्याग (गैर बुनेको झोला) तयार गर्ने उद्योग सञ्चालनमा आएको हो । प्लाष्टिक झोलाले फैलाउँदो वातावरणिय प्रदषणलाई मध्यनजर गर्दै साङ्लो गु्रपले पहिलो उद्योगको
नेपाल र चीनबीच १८ समझदारीपत्र र दुई लेटर अफ एन्सचेञ्जमा हस्ताक्षर
बैंकिङ खबर । नेपालका सरकार प्रमुख र चीनका राष्ट्राध्यक्षको तहमा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय औपचारिक वार्ता केहीबेर अघि राजधानीमा सम्पन्न भएको छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आ–आफ्नो मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेको उक्त वार्तामा नेपाल–चीन सम्बन्धका सबै पक्षमा केन्द्रित रहेर विचारविमर्श भएको थियो । वार्ता समाप्तभएसँगै राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा चीन र
कर्जाको व्याजदर ३% बनाउन विद्युत् नियमन आयोगको अनुरोध
बैंकिङ खबर । हाइड्रोपावरको नियामक बिद्युत नियमन आयोगले निजी क्षेत्रबाट संचालित रुग्ण जलबिद्युत आयोजनाहरुको कर्जाको ब्याजदर घटाउन अनुरोध गरेको छ । आयोगले कर्जाको व्याजदर ३ प्रतिशत कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको हो । अहिले रुग्ण जलबिद्युत आयोजनाको ब्याजदर १४।१५ प्रतिशत छ । ३ प्रतिशत ब्याजदर कार्यान्वयन भएमा बैंकले सेवा शुल्क जोड्दा ब्याजदर ५।६
बैंकिङ खबर । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले चालू आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ६.३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । संघीय तथा तल्ला सरकारहरूको पुँजीगत खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने र निजी लगानी पनि राम्रो बन्न सके आर्थिक वृद्धिदर यो प्रक्षेपणभन्दा पनि राम्रो हुने पनि एडिबीको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । एडिबीले उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ७.९
बैंकिङ खबर । आयात घटेर निर्यात बढेपछि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा व्यापार घाटा घटेको छ । साउन मसान्तसम्ममा नेपालले ९७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा व्यहोरेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३.९ प्रतिशतले कम हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वस्तु व्यापार घाटा एक अर्ब १३ अर्ब ६९ करोड
बैंकिङ खबर । भूमि सम्बन्धि आठौं संसोधन विधेयक २०७५ संघीय प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मावकुमारी अर्यालले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदन सहितको भूमि सम्बन्धी (आठौं संशोधन)विधेयक २०७५ माथि छलफल गरियोग भनी संसदमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । भूमि सम्बन्धी ऐनका मुख्य विशेषताहरूः १) भूमिहिन सुकुम्वासीहरूलाई
बैंकिङ खबर । मुलुकको चालू खाता खाता घाटा, शोधानान्तर स्थिती र व्यपार घाटा अयिन्त्रित ढंगले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाका आर्थिक एवम् वित्तीय स्तिीका अनुसार, जेठ मसान्तसम्ममा चालु खाता घाटा ३८ अर्बभन्दा बढीले विस्तार भई दुई खर्ब ४८ अर्ब ७२ करोड पुगेको छ । देशभित्र आउने र